6 Calaamadaha Hore ee Kansarka Caloosha | Astaamaha, natiijooyinka iyo calaamadaha caafimaad
6 Calaamadaha Hore ee Kansarka Caloosha
21 / 04 / 2018 /0 Comments/i tayada Articles/av waxyeelladayda
Halkan waxaa ah 6 astaamood oo hore oo ah kansarka caloosha iyo kansarka caloosha oo kuu oggolaanaya inaad ku aqoonsato cudurka marxaladda hore oo aad hesho daaweynta saxda ah. Cilad-baarista hore waa mid aad muhiim u ah si loo awoodo in la sameeyo go'aannada saxda ah ee la xiriira daaweynta - iyo wax ka beddelka nolol-maalmeedka (oo ay ku jiraan la-qabsiga cuntada iyo tallaabooyinka dhiirrigelinta difaaca jirka). Calaamadahan midkoodna ma aha in aad leedahay kansarka caloosha, laakiin haddii aad isku aragto astaamo badan, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto GP gaaga si aad ula tashato.
Kansarka caloosha iyo caloosha ayaa ah nooca shanaad ee ugu badan ee kansar, laakiin waa kan saddexaad ee ugu dhimashada badan. Inta badan dadka laga helo kansarka caloosha waxay horeyba ugu jiraan heer fiditaan (metastasis) ama waxay ku dhow yihiin inay u gudbaan heerkaas. Metastasis waa marka kansarku ka faafo aaggii uu ka bilaabmay una sii gudbo aag kale - badiyaa iyada oo loo maro qanjidhada u dhow. Calaamadaha kansarka caloosha waxay noqon karaan kuwo aad u khiyaano badan, adag in la ogaado, waana sababta saxda ah ee aan u rabno inaan u soo bandhigno - si inta ugu badan ee suurtogalka ah ay uga feejignaadaan iyaga oo ay astaamahooda u baaraan GP-ga inta ay goori goor tahay.
Calool xanuun iyo kansarka caloosha waxay dilaan dad aad u tiro badan cilmi baaris dheeraad ahna waa in diirada lagu saaraa kansarka noocan ah (iyo kansarrada kale) - sababtaas awgeed ayaan kugu dhiirigelinaynaa inaad La wadaag maqaalkan warbaahinta bulshada, Xor ayaad u tahay inaad jeceshahay boggayaga Facebook oo waxaad dhahdaa, "Haa si cilmi baaris dheeraad ah loo helo". Sidan, qofku wuxuu ka dhigi karaa astaamaha kansarka mid muuqata oo hubiya in maalgelinta cilmi baarista lagu sameeyo hababka cusub ee baaritaanka iyo daaweynta loo kala hormariyo. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa taageerida Ururka Kansarka.
Waxaan ognahay in astaamihi hore ee kansarka caloosha ay ku kala duwanaan karaan qofba qof ka kale sidaa darteedna tilmaamaya in astaamaha soo socda iyo astaamaha caafimaad ay yihiin wax guud - iyo in maqaalka uusan daruuri ka aheyn liis dhameystiran oo astaamo suura gal ah oo saameyn ku yeelan kara marxalada hore. kansarka caloosha, laakiin waa isku day lagu muujinayo astaamaha ugu caansan. Xor ayaad u tahay inaad adeegsato faallooyinka qaybta hoose ee maqaalkan haddii aad wax seegto - markaa waxaan ku dadaali doonnaa inaan ku darno.
Sidoo kale aqri: - 7 Jimicsi oo loogu talagalay takhaatiirta Rheumatists
1. Dhiig saxarada ku jira
Dhiigga saxarada micnaheedu ma aha kansarka caloosha iyo caloosha. Astaantan ayaa sidoo kale ku dhici karta Ulcerative colitis ama cudurka Crohn. Laakiin haddii aad saxaro ka aragto calaamado dhiig ah, tani waa calaamad muujineysa inaad dhaqso ula xiriirto Takhtarkaaga Guud - ka dibna loo gudbiyo takhasus caafimaad. Haddii hadhaagu uu madoobaado, ku dhowaad madow, markaa waxay u badan tahay inay la xiriirto astaamaha kansarka - maxaa yeelay tani waxay muujinaysaa in dhiigga “dheefshiiday” enzymes -ka calooshaada. Laakiin sida la sheegay, dhammaan astaamaha noocaas ah waa inuu sii baaro dhakhtar takhasus u leh oo iyagu waa khubarada baaritaanka noocan ah.
Ku biir kooxda Facebook «Rheumatism - Noorwey: Daraasad iyo warar»(Halkan guji) si aad u hesho cusboonaysiinta ugu dambeysa ee ku saabsan cilmi baarista iyo qorista warbaahinta ee ku saabsan xanuunnada daba-dheeraada. Halkan, xubnuhu sidoo kale waxay ka heli karaan caawimaad iyo taageero - wakhti kasta oo maalinta ah - iyadoo la adeegsanayo isweydaarsiga khibradahooda iyo talooyinkooda.
2. Si dhakhso leh ayaad u fadhiisataa
Aynu nidhaahno waad gaajaysnayd markii aad u fadhiisatay inaad wax cuntid, laakiin xitaa waxoogaa qaniinyo ah ka dib, waxaad dareemeysaa in rabitaankaaga cuntada uu kaa dhammaanayo oo aadan mar dambe u haynin hammi gaar ah oo cunto ah. Dareenka noocan oo kale ah ee dherga - gaar ahaan haddii tani ay tahay wax aanad weligaa soo arag - waxay muujin kartaa inay jiraan dhibaatooyin caloosha iyo mindhicirada, iyo waxyaabo kale, waxay noqon kartaa calaamadda hore ee kansarka caloosha.
3. Xanuun caloosha iyo xiidmaha
Haa, runtii waa kiiska calool xanuunku wuxuu calaamad u noqon karaa kansarka caloosha, laakiin inta badan kiisaska, dhibaatooyinka calooshaada waxaa sabab u ah wax gebi ahaanba ka duwan - iyo wax aad uga badan. Xanuunka kansarka caloosha ayaa inta badan lagu tilmaamaa mid ka duwan - iyo mid joogto ah oo “ruugaaya”. Markaa ma aha xanuun ku haya dhowr saacadood ama maalin, ka dibna wuu baaba'aa - ka hor intaadan la kulmin wax la mid ah laba toddobaad ka dib. Xanuunka dabeecadda leh ee kansarka caloosha waxaa badanaa lagu tilmaamaa xanuun soo noqnoqda oo fadhiya bartamaha caloosha.
4. Miisaan lumis shil ah
Tani waa astaan ​​muhiim ah oo hore oo ah kansarka caloosha iyo kansarrada kale. Haddii aad lumineyso miisaan badan adigoon isku deyin jimicsi kordhay iyo cunno fiican, markaa waxaad u baahan tahay inaad tan si dhab ah u qaadatid oo aad GP-gaaga la qaadatid. Laakiin sidoo kale waa in la sheegaa in miisaanka luminta shilalka ay ku dhici karto baaritaanno caafimaad oo badan - sida nooca sonkorowga 1, cudurka Addison iyo cudurka Crohn.
5. Dib u soocelinta Acid iyo wadna xanuun
Laab jeex, dib u soo nooleynta aashitada iyo astaamaha kale ee caamka ah ee caloosha kacsan iyo dhirta mindhicirka waxay noqon karaan digniino hore oo ku saabsan kansarka caloosha - laakiin waxay aad ugu dhowdahay inay ka yimaadaan baaritaanada kale ee caloosha iyo caloosha. Haddii aad si joogto ah u dhibsato astaamaha noocan oo kale ah markaa waxaa lagugula talinayaa inaad kala hadasho GP-gaaga.
6. Shuban, dibbiro iyo calool fadhi
Waa wax macno samaynaya in koritaanka kansarka ee calooshaada uu kaa dhigi karo inaad dareento calool xanuun oo dhibaato u keento mindhicirkaaga - laakiin maahan kiiska in astaamahan ay ku qeylinayaan inaad leedahay kansarka caloosha. Si kastaba ha noqotee, haddii aad si joogto ah ula kulanto dhowr calaamadood oo ku yaal liiska aan soo sheegnay, waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad kala hadasho tan dhakhtarkaaga.
Marka waxaan rajeyneynaa inaad fahantay muhiimadda ay leedahay inaad aado GP-gaaga haddii aad isku aragto astaamahaas. Waxaa wanaagsan inaad aado dhaqtar aad u badan GP-ga hal mar aad aad u yar.
Maxaad sameyn kartaa haddii aad qabtid kansarka caloosha?
Tixraac ku saabsan sawirrada sawirka
U diritaan takhasus caafimaad
U habeyn nolol maalmeedka
Ka shaqeynta garashada
Mar labaad, waxaan rabnaa si fiican u waydii si aad ula wadaagto maqaalkan warbaahinta bulshada ama bartaada (fadlan si toos ah ugu xir qormada). Fahmitaanka iyo xoojinta diiradda ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee nolol maalmeedka wanaagsan loogu talagalay dadka ay saameeyeen kansarka caloosha iyo cudurrada kale ee kansarka.
Kansarka caloosha waa nooc ka mid ah kansarka oo ay adkaan karto in la ogaado sababo la xiriira astaamo jilicsan. Kansarka caloosha iyo caloosha wuxuu leeyahay heer dhimasho sare ah - waana sababta saxda ah ee aan ugu tixgelinayno inay aad muhiim u tahay in dadweynaha guud ay ka warqabaan astaamaha iyo astaamaha hore ee cudurkaan. Waxaan si naxariis leh kaaga codsaneynaa inaad jeclaato oo aad la wadaagto tan si loo xoojiyo diiradda iyo cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan kansarka caloosha iyo baaritaanka kale ee kansarka. Aad baad ugu mahadsan tahay qof kasta oo jecel oo wax la wadaaga - waxay uga dhigan tahay heshiis aan caadi ahayn kuwa ay saameysay.
Xulashada A: Toos ugu wadaag FB - Nuqul cinwaanka mareegaha oo ku dheji boggaaga facebook ama koox ku habboon facebook oo aad xubin ka tahay. Ama riix badhanka "wadaag" ee hoose si aad ugu sii wadaagto qoraalkaaga facebook -gaaga.
Aad ayaan kuugu mahadnaqayaa qof kasta oo gacan ka geysta kobcinta fahamka kansarka caloosha iyo cudurrada kale ee kansarka!
PAGE xiga: - 6 Calaamadaha Hore ee Cudurka Lyme
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/magesmerter7.jpg?media=1648573622 378 699 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2018-04-21 10:22:022018-05-03 13:11:306 Calaamadaha Hore ee Kansarka Caloosha
6 Calaamadaha Hore ee Borreliosis 9 Calaamadaha hore ee Celiac Cudurka (Xasaasiyadda 'Gluten Allergy')